Enwere ụlọ ọrụ weebụ SEO dị na weebụ nke pụrụ inyere m aka na backlinks?
N'okpuru ebe a, m ga-agwa gị otu ị ga-esi wepụta ebe nrụọrụ weebụ SEO dị na weebụ iji gbochie ihe ọ bụla nwere ike ime. Enwere m ebe a nsogbu kachasịsịsị iche na imebi nduzi Google, nke nwere ike ibute ntaramahụhụ n'usoro ma ọ bụ ọbụna ntinye ederede nke ngalaba dum. Ihe bụ na engines ọchụchọ na-ele anyị anya iji chọpụta ihe ọ bụla mmebi, njikwa, ma ọ bụ ntụpọ ntụpọ maka ọkwa dị elu karịa na SERPs. Otu n'ime ihe ndị ọzọ na-emekarị, bụ enweghị àgwà dị mma, nakwa nkwụsị azụ na-ezighị ezi. Ọ bụ ya mere ọ ga-abụ echiche ezi uche dị na ya iji na-elegide anya na usoro nke njikọ njikọ njikọta maka ibe weebụ ọ bụla. Ime otú ahụ, ị ​​ga-achọ ịhọrọ ebe nchekwa weebụ SEO dị na weebụ. E nwekwara ọtụtụ ngwá ọrụ dịka nke dị na ịnweta ohere. Ya mere, otu esi eme nhọrọ zuru oke mgbe niile?
Ka anyị malite na ihe dị mkpa nyocha gị na mbụ. Enwere m ike itinye aka abụọ n'ime ihe ndị na-esonụ:
Njikọ gị njikọ akụkọ ihe mere eme nke ọ dịkarịa ala ọnwa atọ
Nnyocha miri emi banyere njikọ njikọta gị
) Ebe isi mmalite nkwado gị
Nyocha ọdịnala maka ụdị njikọ ọ bụla ị nwere
Ya mere, iji gbochie ọ bụla Google penalties maka enweghị azụ azụ, ana m akwado ịtụle weebụsaịtị SEO online site na ihe ndị a na-eji eme nchọpụta na-esonụ: Serpstat, Ahrefs, Majestic, or Semet Analyzer. Ma, m na-akwado nlekota ngalaba gị backlinks kwa izu, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala otu ugboro n'izu abụọ. Iji weebụsaịtị weebụ ọ bụla SEO m kwuru tupu ị nwere ike inyere gị aka ijikwa usoro ahụ n'ụzọ dị mma, ọ fọrọ nke nta ka o zuru ezu.
Iji mee ka nlekota nlekota anya di ngwa ngwa ma di mfe karị, ka anyi lee ihe nkochi nke nyocha nke weghachite Backlink Analysis site na Serpstat maka ihe omuma. Iji bido nyochaa ihe niile, ọ dị anyị mkpa ileta ibe weebụ nke ndị na-eweta ihe n'Ịntanet. Ozugbo anyị banyere aha ngalaba anyị nke chọrọ ichota, a ga-enye anyị nchịkọta nchịkọta banyere ọkwa dị mkpirikpi. N'ileghachi anya na akụkọ nyocha a, anyị weere dịka ọmụmaatụ, anyị ga-ahụ ihe ndị a:
Ọnụ ọgụgụ nke backlinks
Akụkọ akụkọ kachasị ọhụrụ, na-ekpuchi mmelite niile na mgbanwe, nke mere site na oge kachasị elu ruo ọnwa atọ
Ndepụta nchịkọta nke njikọ ndị a pụrụ ịdabere na ya sitere na ngalaba mpaghara nke ike kachasị dị ka. edu ma ọ bụ. Gọọmentị, nke Google kwadoro nke ọma, yana ndị ọzọ na-eduzi engines na-eduga, dị ka Bing na Yahoo
Ndepụta nchedo nke ọma nke na-ekpuchi njikọ ọhụrụ echekwara na nso nso a, ma maka nlezianya kachasị anya na
Oge nhazi oge kachasị ọhụrụ na ebe ị na-ezo maka oge na-adịbeghị anya ruo ọnwa atọ
Ndepụta ndepụta nke arịlịka gị, yana ọnụ ọgụgụ ha dum
Nchịkọta chịkọtara banyere arụmọrụ azụmazụ weebụ gị, nke Serpstat mere atụmatụ dịka njirimara nke ntụkwasị obi.
N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịtụ anya ọbụna nyochaa nkwado azụ na ntanetị weebụ SEO maka ịntanetị iji weghara ihe karịrị minit 10-15. Dị ka m kwuworo, ọ bụ naanị gị ịhọrọ ụzọ nke backlink analysis na otu n'ime ngwaọrụ anọ ahụ a kpọtụrụ aha ná mmalite. Ma mụ onwe m, achọtara m ebe nlele weebụ kachasị mma m na-eji ejiji site na Serpsat. Ị nwekwara ike gbalịsie ike iji Semalt Analyzer, n'ihi na ọbụnadị na-agbanyekwu n'ime saịtị gị kwa ụbọchị Source .